यो कस्तो अचम्म विमानभित्रै भिखारी भिख माग्दै… (भिडियोसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
यो कस्तो अचम्म विमानभित्रै भिखारी भिख माग्दै… (भिडियोसहित)
रेल र बसमा भिखारी देख्नु त सामान्य कुरा भइहाल्यो । तर सोच्नुस् त जब कुनै भिखारी विमानमा भिख मागिरहेको होस् त ? जे भएता पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटा यस्तो भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा एउटा भिखारी विमानभित्र भिख मागिरहेको छ।
विमानमा सवार एक व्यक्तिले यस्तो भिडियो बनाएर सामाजिक सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि यो भाइरल भएको हो । तर उक्त भिडियो कहिले र कहाँको हो ? त्यसबारेमा भने पुष्टि भएको छैन ।
तर, केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो भिडियो पाकिस्तानको हो । उनी पाकिस्तानको करकँचीबाट बैंकक जाँदै गरेको फ्लाइटमा एक भिखारी विमानभित्र छिरेर यात्रुहरुसँग भिख माग्न लागे ।
भिडियो भाइरल भएपछि पाकिस्तानी उड्डयन मन्त्रालयले यसबारेमा चासो व्यक्त गर्दै उनी आफ्नो देशको नागरिक नभएको दाबी गर्दै भनेको छ कि उनी एक इरानी नागरिक हुन ।
भिडियोमा भिखारी विमानभित्र उभिएका छन् र मानिसहरुसँग पैसा मागिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । विमानभित्र भिखारी देखेर यात्रुहरु आत्तिएको भिडियाृमा देख्न सकिन्छ । त्यसपछि फ्लाइट क्रू का सदस्य आएर उनलाई बस्न आग्रह गर्छन् । त्यसबीच एक व्यक्तिले उनलाई केही पैसा दिन्छन् ।
एयरहोस्टेजले उनलाई शान्त रहन भन्छिन् । फ्लाइट क्रू का अर्का सदस्यले पनि उनलाई सम्झाउने कोशिश गरेको भिडियोमा देखिन्छ । सोही समयमा भिखारीले पकेटबाट एक पर्चा निकाले र उनको हातमा राखिदिन्छन् ।
फ्लाइटमा सवार यात्रुहरुले उनको मज्जाका उडाएको भिडियो देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म यी व्यक्ति (भिखारी) टिकट लिएर विमानमा चढेका थिए अथवा अवैधरुपमा त्यो भने अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन ।
Posted by Karachi – The City Of Lights on Monday, 18 June 2018